Vakwegura Masherufu Makambani neakagadzwa Kambani Kiredhiti
Saka, iwe unowana sei chikwereti chekambani? Inoita sei kambani yakwegura AKA rafu kambani kukubatsira kuwana chikwereti chebhizimisi? Tichaedza kupindura iyi mibvunzo zvakadzama pazasi.
Chekutanga pane zvese, kambani, senge mubatanidzwa kana LLC, yakaparadzaniswa nevaridzi vayo. Mutemo unoti mubatanidzwa munhu "zviri pamutemo" Saka, zera revaridzi hazvireve kuti rinoenderana nezera remakambani. Kana iyo HJ Heinz Kambani inoshambadzira kuti yakavambwa mu1869, hazvireve kuti vese vanogovana vane makore anopfuura zana zera. Izvo zvinongoreva kuti mumwe munhu faira iyo kambani mugore iro. Iwe unogona kutora mukana wakafanana wekuvimbika mabhenefiti kana kushambadzira kune vatengi.
Zera rekambani yako rinogona kupa kuvimbika kukuru kune vatengi uye vanokweretesa. Ndokunge, yakwegura masherufu kambani ine hukuru hwakakura kupfuura bhizinesi iro richangobva kusimbiswa. Izvi zvinonyanya kuitika kana hurefu hwenguva yawanga uri mubhizinesi hwakaenzana nezera rekambani yaunowana. Semuenzaniso, ngatitii wanga uri muchikamu chemapombi dzemvura kwemakore gumi nemaviri. Gweta rako uye accountant vanokurudzira kuti iwe ubatanidze kuchengetedzwa kwemhosva uye kuchengetedza mutero. Nekudaro, iwe unowana 12-gore-gore rekare mubatanidzwa unoenderana pamwe nenguva yenguva yawanga uri mubhizinesi. Nenzira iyi, kana iwe uchishambadzira kuti wanga uri mubhizinesi kwemakore gumi nemaviri, kana angangove mutengi akakutarisa iwe kambani, ivo vanozoona kuti yako yekubatanidza faira zuva rinoenderana neiyo nguva yawakaitisa bhizinesi.
Saizvozvowo, kuwana makambani uye mamwe mabhizinesi anoshanda ane akaisirwa chikwereti uye aripo echikwereti mitsara pamwe nekuvaka kiredhiti pane yako kambani kunogona kupa iro bhizinesi kukura kukuru kwemari. Izvo zvine basa kucherechedza kuti zera zvirokwazvo harisi iro rega chinhu chinokwereta uye kuvimbika kwebhizinesi uye tinokurudzira kuzarurirwa kwakazara maererano nezuva rawakatora kambani yakura.
Tine zvirongwa zvinodhura chaizvo zvinogona kubatsira nekukurumidza kuwana bhizinesi kiredhiti.
Chenjera nemasangano muzuva rino uye zera anoti iwe unogona kuwana kambani inotova nemakiredhi echikwereti akasungirirwa pairi. Kana iwe uchida kuwana kambani yakwegura, tipe runhare. Mushure mekuiwana isu tinogona kukubatsira iwe kuvaka chikwereti pairi.
Makambani Anopindirwa anopa akawanda akadaro makambani uye maAdvs. Kune akawanda masherufu eshevedhi Nevada makambani, Delaware makambani, Wyoming makambani, ekumahombekombe / epasi rese makambani uye eCanada Makambani anowanikwa Makambani akanyanya kukosha akadai ekukurumidza kuwana uye kuvaka bhizinesi anogona kunge ari masherufu emakambani. Makambani aripowo munyika ino ayo atove nemakambani echikwereti zvikwereti uye akasimbisa hukama nevakweretesi, kunyange makambani aya achiwanzoshanda anoshanda masangano.
Makambani Akabatanidzwa ane akakosha mapakeji anosanganisira akura masherufu kambani pamwe nechirongwa apo patinovaka chekambani kiredhiti mamaki neDun & Bradstreet uye mamwe echikwereti mamiririri. Tinogona kuronga kusangana nevakweretesi avo, kana vapihwa mvumo, vanogona kubatsira kuronga chikwereti chekuwedzera bhizinesi, zvekushandisa zvebhizinesi, uye kutenga kwezvivakwa.
Imwe chirongwa chiripo kudzidziswa kwezvivakwa, kubvunza uye yekuwedzera chirongwa chekuvaka chikwereti. Isu tinoronga kuti ave neruzivo rwekudyara zvivakwa nyanzvi akawana mari inodarika miriyoni imwe yemadhora muzvivakwa kuti auye kuguta rekumba kwako kwemazuva maviri kana matatu uye ape chirongwa chakasimba chekudzidzisa. Izvi zvinosanganisira kuongorora zvivakwa, kupa zvipo pazvivakwa, kana mari dzakakodzera dziripo, uye kuratidza mashandisiro emari yeimba yacho nemari shoma sezvinobvira pakutengesa.
Musoro wekare kune ino peji, uchireva kune akwegura masherufu makambani ane kiredhiti kiredhiti uye aripo echikwereti mitsara yakaiswa kune SEO zvinangwa nekuti kutsvagurudza kwedu kwakaratidza kuti paive nekutsvaga kwakawanda kwetemu iyoyo. Isu tichangobva kuchinja zita kuti riwedzere kuratidza chidzidzo chepeji. Ongorora: Chirongwa chakurukurwa pazasi hachisisipo uye ndechecheferenzi chete.
Yedu Yakwegura Kambani ine Kiredhiti Rubatsiro Package inosanganisira zvinotevera zvinhu:
Batsira kuwana chikwereti cheReal Estate, kazhinji kusvika $ 1 miriyoni yakawanda - Iwe uchagamuchira mubatanidzwa kana LLC. Iwe unoendesa zvivakwa zvekutenga zvivakwa zvemari. Iwe unogona, pasi pekupihwa mvumo yechikwereti, gamuchira kusvika kumadhora miriyoni imwe muchikwereti chakachengetedzeka kune real estate zvivakwa zvekutanga nenzvimbo inokweretesa. Uyezve, isu tine hukama nevazhinji vanowedzera vega vanopa mari avo vanoda kukweretesa kumakambani pamwe nevanhuwo zvavo. Nomuzvarirwo, mukweretesi anozotanga kuda kuona kuti kukosha kweimba kuchatsigira mari yechikwereti uye kuti chikwereti chakachengeteka kumukweretesi kuburikidza nekunyora kunyorerwa pasati pabhadharwa mari. Sezvo chero munhu anonzwisisa anganzwisisa, kuve nekambani kana LLC, pachayo, hakutenderi munhu kuti apinde mubazi rezvemari uye kudiridzwa nemari yemadhora. Nekudaro, varairidzi vedu vanongokudzidzisa iwe nzira yekudyara muzvivakwa uye maitiro ekutora muridzi wepfuma muzita rekambani yako. Yedu network uye vatinoshamwaridzana navo vakaronga mamirioni emadhora mukutsigira vatengi. Isu hatisi vatengesi vezvikwereti, saka isu hatiwane komisheni pazvikwereti. Isu tinongobatsira kuronga zvikwereti uye tinokutumira kune vanofanirwa kukweretesa. PASI PASI PASI, ZVEMAITI, HAPANA HWEMAHARA KUTI KUNYANYA KUNYANYA KUTENGA KUNOGONESWA. KUSANGANISWA KWEMAITI KUSVIRA KUSVIRWA KWEZVINHU ZVOKUCHENGETESWA KWEZVIMBO NEMUTENGESI (S).
Kudzidziswa-Mumwe-Mumwe - Isu tinotumira nyanzvi iyo yakawana pamusoro pe $ 1,000,000 XNUMX XNUMX muzvivakwa kuguta rako kuti ikudzidzise pamusoro pekuwana real estate kiredhiti uye kuti ungawedzere sei kudzoka kwako kana uchiisa mari muzvivakwa. Uku kudzidziswa kwemazuva maviri kusvika matatu. Haisi yekudzidzira kirasi. Uyu wega 1-on-1 maoko-on, kumeso-kumeso kudzidziswa mutaundi rako. Mudzidzisi achatsvaga zvivakwa newe, achakuratidza maitiro ekuisa pamwe chipo, pamwe nemari shoma muhomwe yako, uye maitiro ekuita mari yakawanda kuisa muzvivakwa. Iwo manejimendi eMakambani Akabatanidzwa anga achipa chirongwa ichi chekudzidzisa kubvira 1994. Isu tinotenda kuti pamusoro pevatengi vese vakaita chinhanho-chekudzidzisa mumwechete akagutsikana zvakanyanya. iwe uchagutsikana kwazvo neiyi-yega-yekudzidziswa. Iwe uchavhara mari yemudzidzisi yekufambisa. Chikonzero cheichi ndechekuti kunyangwe murairidzi achifanira kufamba achiyambuka mugwagwa kana kufamba achiyambuka nyika, tinoda kuona kuti une mari shoma uye hatidi kutara mutengo wemunhu wese nekuti mari yekufamba inosiyana. Chairo mutengo unogona kunge uri mazana matanhatu kumatikiti ekufamba rwendo uye mazana maviri pazuva kuhotera uye chikafu. Saka, mutengo wacho wakanyanya kushoma.
Kuwedzera Kiredhiti Lines Yeasina-Real Estate Kutenga - Wekambani kiredhiti anovaka murairidzi, uyo achashanda newe kuvaka yako yemakambani kiredhiti kiredhiti, kusanganisira yakarongeka chirongwa pamwe nemutero wakasununguka wekutsigira mutsara. Murairidzi wako tichashanda newe kuti ugone kushandisa nekuvaka imwe kiredhiti pane zvaunoda uye uwane Dun & Bradstreet kiredhiti chikwereti zvichienderana nekutora kwako kwakakodzera mukuita.
Ona yedu runyorwa rweanowanikwa makambani akwegura pano.
Mushure mekunge mukweretesi aonesa kukosha kweiyo chivakwa kuchengetedza iyo chikwereti, uye yakabvumidza iko kutengesa kuburikidza neyakajairika kunyorera maitiro uye yakakwana chikwereti kuchengetedzeka, inosvika $ 1 miriyoni ichaiswa waya muchikwereti pachibvumirano nechibvumirano hwaro hwekutenga zvivakwa kana zvimwe zvakachengetedzwa zvinhu. Zvekare, ichi hachisi chivimbiso. Mari dzinopihwa chete mushure mekunge mukweretesi abvuma kubhadhara mari yekutenga.
Kiredhiti inowanikwawo kune akasiyana siyana bhizinesi michina, mota uye zvimwe zvinhu zvinogona kugadzirirwa zvaunoda, zvichitarisirwa nemukweretesi mvumo, izvo zvinogona kuwanikwa sechikamu chekambani chikwereti coaching chirongwa.
Mari yekutengesa zvivakwa inowanikwa pekugara, yekutengesa, ivhu kana imwe real estate pamwe nezvimwe zvakachengetedzwa midziyo kana zvishandiso.
Mudzidzisi wako anokuratidza maitiro ekugadzirira mvumo inogamuchirwa yekutenga chivakwa uchishandisa kiredhiti kiredhiti. Mudzidzisi achakuratidzawo maitiro ekugadzirira zvinopihwa izvo zvisingade mari yekubhadhara pasi.
Ko iyo mubatanidzwa kana LLC ichave neDun & Bradstreet (D & B) nhamba uye "Paydex®" mamaki?
Ehe. AD & B nhamba, kuendesa kwePaydex mamakisi uye chirongwa chekambani chekuvaka chikwereti chikamu chezvekuwedzera chikwereti mitsara yekutsigira chirongwa. Iwe unozopihwa yemubatanidzwa chikwereti murairidzi anozoita rakawanda basa mune rechikwereti chirongwa chekuvaka.
Ndinogona here kushandisa mari chero nzira yandinoda?
Zvinoenderana nezvaunoda. Kana iko kutengeserana kuchiita kunzwisisika kwebhizimusi kune iwe nemukweretesi uye kuri mukati memamiriro ekuchengetedza anonzwisisika, hongu. Mari yacho ichave newaya, zvichitenderwa nemukweretesi, kupinda mu escrow yekutenga zvinhu zvakaita se real estate kana kubhadharwa kukambani kana LLC kwauri kutenga zvimwe zvinhu. Mukweretesi ane mukana wakakura wekushanduka asi hapana mukweretesi akabudirira anoisa waya pamiriyoni muaccount yako asina kutanga atarisa kuti ave nechokwadi chekuti pane kukosha kwakaringana kuchengetedza chikwereti kuwedzera pakuongorora mamwe ma parameter ekuchengetedza-chikwereti. Vese kana vangangoita vese vatengi avo vakatevera rairo dzakadzidziswa mune-yega-yekudzidziswa uye vakatevera rairo vakakwanisa kuwana imwe nzira yemari.
Ini ndinogona kukwereta mari ndisingashandisi yangu pachangu kiredhiti?
Ehe. Iyo yakachengetedzwa kiredhiti yezvivakwa yakagara ichiwanikwa ne100% yemakambani kiredhiti pasina hanya nezvako pachako zvikwereti zvikwereti, zvinoenderana nezvinodiwa nemukweretesi. Neimwe nzira, anonyora anogona kunge iwe uchibatanidza simba rekambani neako rako kuti uwedzere simba rako rekukwereta. Nomuzvarirwo, izvi zvinoenderana nekuchengetedzeka kwechikwereti kune anenge akweretesa. Munguva dzichangopfuura, vazhinji vakweretesi vari kutarisa maparamende asiri echikwereti chebhizinesi Saka, zvinoenderana nemukweretesi.
Sei pasirese iwe unogona kuita izvi nemusi uno wakasimba musika wechikwereti?
Tine vakweretesi vane, kwemakore mazhinji, vakavaka netiweki dzevashambadziri vega vanoisa mari muzvivakwa zvezvivakwa. Nekudaro, pachinzvimbo chekushanda nemabhangi, vatapi vedu vanopa mari zvikwereti kubva kunetiweki yakakura yevarimi vega. Zvekare, isu tinobatsira kuronga zvikwereti uye kuendesa vanokweretesa chete sekushandira kwauri. Isu hatigamuchire makomisheni kubva kune zvikwereti.
Ini ndinogona kushandisa iyo yemakambani kiredhiti kutenga iyo mubatanidzwa kana LLC, chikwereti chirongwa kana real estate kudzidziswa kubva kwauri?
Kwete. Iwe unofanirwa kutenga iyo mubatanidzwa kana LLC, kiredhiti anovaka uye / kana chirongwa chekudzidzisa nemari yako wega.
Ini ndinogona kuisa imwe yemari muhomwe yangu?
Kune nzira dzekuronga zvivakwa zvekutengesera zvivakwa kuitira kuti kana chivakwa cheimba chivhara, unokwanisa kugamuchira mari kumashure muhomwe yako kubva pakutenga kwepfuma, kunyange izvi zvisina kuvimbiswa. Maitiro anoshandiswa anozodzidziswa mukosi yekudzidzira.
Ndiani anotendera zvikwereti uye zvivakwa kana zvimwe zvekutenga?
Iyo kosi yekudzidzira ichakuratidza maitiro ekuita zvinogamuchirwa zvinopihwa uye mukweretesi anotendera ezvemari zviitiko.
Unondipa mari yekutengesa zvivakwa kwandiri yandinogona kutenga uchishandisa kiredhiti kiredhiti?
Ipo iwe uchikwanisa kushandisa mari kutenga chero chinogamuchirwa chidimbu chezvivakwa, mari dzinove dzakafanotariswa nemurayiridzi wedzidzo dzinowanzo kuwanikwa kana zvichidikanwa. Izvi zvinoita sekureruka chete uye, haudiwe kutenga zvivakwa izvi. Unogona kushandisa mari kutenga zvimwe zvivakwa zvaunowana kunze kweizvo zvinopihwa mukosi.
Ndeupi rudzi rwezvivakwa wandinogona kutenga?
Pokugara, mhuri imwe chete, yakawanda-yemhuri, yekutengesa, yekufungidzira, ivhu mbishi, mhuri imwechete, zvirevo, zviitiko, kugadzirisazve zvinosanganisira izvo zvinobatanidzwa zvinhu uye nemubhadharo wevashandi. Zvinyorwa zvinodzidziswa mukosi yekudzidzira.
Ini ndinogona kuwana 100% mari ndisina kutora mari muhomwe?
Ehe. Nzira idzo iyo 100% yemari yakarongedzwa inodzidziswa mukosi yekudzidzira. Dzimwe nzira dzinodzidziswa panodiwa kubhadhara pasi, kungave kwauri kana kubva kune mumwe wevaunoshamwaridzana navo.
Ini ndinogona kuwana inodarika $ 1 miriyoni kiredhiti?
Yekutanga yakanyanya pasi pechirongwa chedu ndeye $ 1 miriyoni, zvichitarisirwa kuongororwa kweiyo kukosha kweiyo real estate uye anokweretesa kunyorera maitiro. Nekutevera iko kudzidziswa iwe unogona kudzidza kuti ungawedzera sei iyo mari inogona kukweretwa.
Ndeapi mareti emubereko?
Mhinduro imwecheteyo kana mumwe munhu akakubvunza kuti, "Imotokari inoita sei?" Zvinoenderana. Zvinoenderana nemari yemari yemari uye njodzi dzechikwereti. Sekunyora uku, zvikwereti zvine njodzi shoma, uko mubatanidzwa kana LLC kuchizoshandiswa kukubatsira kutenga imba yaunogara, mitero yemubereko iri 5-8%. Pakati penjodzi zvikwereti, senge pfupi-kwenguva pfupi yekuvandudza mari ndeye 9-12%. Zvikwereti zvine njodzi zvakanyanya zvinogona kuve gumi nenhatu kusvika makumi maviri nemana muzana. Njodzi yakanyanya inogona kunge iri yezvivakwa padyo nenzvimbo dzine njodzi kana yekuvaka njodzi-pfupi. Izvo zvakare zvinoenderana nedunhu mune iyo chivakwa chiri kuwana chikwereti chiripo nekuti kune dzakasiyana mhindu yemitengo inodiwa munzvimbo dzakasiyana Idzi nhamba dziri pamusoro mienzaniso. Nekuda kwekusiyana kwehuwandu hwemubereko nekufamba kwenguva uye zvimwe zvinhu isu hatiite vimbiso pane izvo zvichavezwa nemitero yemari yatinokweretesa (s) mune ramangwana.
Ini ndinogona kushandisa kiredhiti kunatsiridza zvivakwa zvandava nazvo zvino?
Ehe, izvi zviripo.
Ini ndinogona kuvaka kiredhiti pane mubatanidzwa kana LLC yandinotova yangu?
Ehe, isu tinopa chirongwa pazvinogoneka izvi asi zvinotora nguva yakareba kupfuura uye zvaizodhura zvakangofanana nekutenga iripo kambani kana LLC nematare echikwereti.
Iwe unogona here kuratidza kuti mamwe makambani evatengi kana maAdvs akatenderwa chikwereti?
Ehe. Zvinogona kuratidzwa kuti mazana emazana ekugoverwa kwezvikwereti kwakaitwa kune vatengi vevanopa. Isu takagamuchira tsamba kubva kumasangano anokweretesa akabvumidza iyo yemakambani chikwereti zvichienderana nezvivakwa zvemari zvikumbiro zvinopfuudza maitiro avo ekunyorera. Iye anokweretesa uye netiweki yake yemanyuko emari anozoshanda kuti awane mwero iri nani. Kunyangwe hazvo mari yacho yakagadzwa, zvakasikwa, mukweretesi anofanirwa kuve nechokwadi chekuti kukosha kweimba kuchatsigira chikwereti uye kuti chikwereti chakachengeteka kune anenge akweretesa.
Iwe unayo vamwe vatengi vakaita izvi zvinobudirira?
Ehe. Mumwe wevatengi vedu muSpokane, Washington akatanga asina kana chinhu uye akatiudza kuti akavaka mari inosvika mamirioni matanhatu emadhora nekutevera dzidziso. Vamwe vaviri vatengi muFlorida vakaratidza kuti vakatenga madhora mazana mana nemakumi mashanu emabhizimusi mukati memwedzi miviri yekutanga. Mumwe mutengi aive mupurisa uye akazova muzvinashawo wezvivakwa. Mumwe mutengi akawana zvakawanda pane yake yenguva-yenguva dzimba dzekudyara zviitiko kupfuura zvaakange ari pabasa rake. Sezvingatarisirwa, mhedzisiro inosiyana. Chirongwa ichi chinongoshanda chete kana ukaita… uye uteedzere kudzidziswa.
Ndezvipi muzana zvevanhu zvinobudirira?
Isu tinoudzwa nemumwe wevadzidzisi vekosi kuti 87.3% yevatengi vakapfuura nezvirongwa zvekudzidzisa vari kuita imwechete kana yakawanda yekutengesa zvivakwa. Vashoma vanhu vakasara vanga vari mubishi rekuwana madhiri kana vasina kuita nhamburiko inodikanwa sekudzidziswa kwadzinoita.
Ndingavimba newe here?
Ehe. Takatanga kuita bhizinesi muna 1906 uye takazvipira zvizere pakubudirira kwako. Tine kurudziro yakasimba yekuti iwe ubudirire nezvikonzero zvitatu. 1. Kuchengeta vatengi vedu ndicho chinhu chakakodzera kuita. 2. Zvinonzwisisika zvebhizinesi kwatiri nekuti mazhinji ebhizinesi redu ndere kuburikidza neshoko remuromo rinotumirwa kubva kune vanofara vatengi. 3. Paunenge uchifara unenge uri mukana wekudzokorora mutengi. Chinangwa chedu kugutsa zvaunoda uye kuva nehukama hwakareba newe. Ndosaka tichinyatso kuburitsa pachena kuti mari iri pasi peumwe wevatengesi vatinotenderana vanobvumidza kutengeserana kwega kwega uye isu hativimbise mari yechero chiitiko.
Chaiye Muenzaniso weMutengi Aripo
Ndokumbirawo ubaye iyi link yemuenzaniso chaiwo wekuti mumwe wevatengi vedu vatengi akashandisa sei imwe yake Sirifu Masangano ane Chikwereti uye / kana makambani achangoumbwa kuti awane mari inodarika mazana matatu ezviuru zvemadhora mukubatsira pakutengesa kwake kwekutanga.
Chii Chandichadzidza Kubva kuKosi Yekudzidzisa Yakabatana neiyo Kambani?
Shelf Corporation Ine Kiredhiti Kosi Kosi
Iwe Une Zviratidzo kubva kune Varipo Vatengi?
Ehe, ndapota tinya pane vhidhiyo pazasi uye iwe uchaona chaiwo vadzidzi (s) vakashandisa chirongwa chechikwereti uye vadzidzi vakapinda makosi. Iyi ndiyo vhidhiyo imwechete yaungave iwe waona nekudzvanya iyi link iripamusoro uye kupuruzira pasi kune chikamu chechipupuriro.
Ndine chimwe chivakwa chandinoda kutenga. Chako chirongwa chako chingaishandira here?
Chero chero chinjana chekutengesa dzimba chinogona kupihwa mari kuburikidza nechirongwa ichi kana paine chengetedzo yakakwana yekutsigira iyo chikwereti uye inosangana nezvinodiwa nemukweretesi. Imwe yemhosho hombe inogona kuitiswa nemusimari wezvivakwa, zvisinei, ndeyekuda muridzi wepfuma. Vazhinji vevakabudirira kwazvo muzvivakwa vezvivakwa vanoita zvido zvinoverengeka pasvondo.
Izvo chirongwa chedu chingaite kukuudza kana madhiri aunofunga ari kana asiri ekukubatsira. Iye nyanzvi ane ruzivo anouya nechirongwa anozokubatsira kuronga zvakanaka kubva kune zvisina kunaka zvivakwa zvekutengesa. Zvakare, iyo kosi yekudzidzira inokuudza iko kwekuwana iko kunobatsira kwazvo kutengeserana uye maitiro ekugadzirisa zvakanaka zvaunopa.
Vane ruzivo kwazvo uye vatengi vatsva vanogara vachitaura kuti vanonakidzwa nezvakakura kubva mukudzidziswa uye kubvunza. Isu tinokurudzira kuti iwe utarise iwo eDVD makosi ekudzidzisa kana kuenda kumararami makosi usati washandisa yako nguva yekubvunza kuti iwe neako chipangamazano muve mune imwechete peji.
Musiyano uripo pakati peiyi netsika yechinyakare yechikwereti ndeiyi inotevera: Netsika yechinyakare yechikwereti ongororo uye ongororo yekuchengetedzwa kwechikwereti inoitwa isati yapihwa mutsetse wechikwereti. Nekudaro, nechirongwa ichi, sezvo chivakwa chichiunzwa kune anenge akweretesa mushure mekuratidzwa kwechikwereti, kuongororwa uye kuchengetedzwa kwechikwereti kunoitwa mumashure, uye chikamu chechikwereti chiripo chinopihwa chirongwa chakati kana uye kana pakuongorora uye ongororo yekuchengetedza zvikwereti inofadza mukweretesi.
Ko yangu yechikwereti mamaki ichabatanidzwa?
Yako yega chikwereti chikamu hachisi hazvo chikamu cheiyo mvumo maitiro. Kana iye anonyora pasi akaikumbira, inogona kana inogona kunge isingaite yakawanda yezvinangwa zvekukweretesa sezvazviri kuratidza kutendeka kwemunhu anotonga mubatanidzwa kana LLC. Mune mamwe mazwi, kana purezidhendi kana maneja wekambani kana LLC ane yakaipa kiredhiti hazvireve kuti zvinoita mvumo yechikwereti, zvinoenderana nezvinodiwa nemukweretesi. Nekudaro, kana munhu anodzora mubatanidzwa kana LLC aine maitiro anoenderera ehunhu hwekunyepedzera zvakakonzera kutonga kwekubiridzira pamushumo wechikwereti saka inogona kunge iri nyaya yekutendeseka. Nekudaro, yakaipa iwe pachako chikwereti inogona kana inogona kunge isina huremu hwakawanda, zvinoenderana nezvinodiwa nemukweretesi, asi tsika yekushaya kutendeseka ndizvo. Munguva dzichangopfuura vakweretesi vane hanya zvakanyanya nezvekwereti yemunhu muridzi wekambani kupfuura zvavaiita munguva pfupi yadarika.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mutengano ubhadharwe mari?
Nguva pfupi mushure mekunge mukweretesi agutsikana kuti pane yakakwana kuchengetedzeka kwechikwereti uye mukweretesi anoda kubhadhara mari yekutengesa. Isu hatiite zvipikirwa panguva ichatora kuvhara chikwereti, zvisinei, zvikwereti zvinowanzovhara nekukurumidza kupfuura vechinyakare vanopa. Nguva inokwana inodiwa kuti uongorore mutengano kuitira mukweretesi kuchengetedzeka. Rangarira kuzvipa iwe yakakwana nguva kuitira kuti mukweretesi aite nekushingaira kwakakodzera kunodiwa.
Mukweretesi haazodarika nzira dzinodiwa dzekuchengetedza chikwereti nekuda kwekuti uri kukurumidza. Ivo havazoregere kunyora pasi nekuti iwe ucharasikirwa nekutengeserana kana vakasazvibhadhara pane yako nguva. Ivo havazodarika nhungamiro dzekuchengeteka nekuti iwe ucharasikirwa nemari yawakashandisa pamari yechokwadi, kuongororwa kana zvimwe zvinhu. Sezvaungatarisira, ivo vanozoibhadhara iyo kana vagutsikana nekuchengetedzeka kwechikwereti uye kana mukweretesi agutsikana kuti zvakachengeteka kubhadhara mari yekutengesa. Saka, zvipe iwe nguva yekuvhara yakakwana kuti ubvumire ichi chinodiwa.
Heino muenzaniso wepfuma iyo yaingobhadharwa mari kune mumwe wevatengi vedu.
Chipo chakaitwa uko iyo
chikwereti chekambani chinopa mari kune yekutanga mogeji.
Mutengesi wepfuma anotakura rechipiri regeji. (Tinogona kukupa iwe semuenzaniso zvibvumirano zvinoratidza maitiro ekuita zvakadaro kupihwa kana iwe uchinyoresa muchirongwa chedu.)
Yekutanga regeji chikwereti yaive 50% yemutengo wekutenga. (Kusvikira ku80% yeiyo kukosha inogona kupihwa mari pasi pemamiriro ezvinhu akakodzera uye kana mukweretesi akanzwa kuti chikwereti chakachengeteka.)
Yechipiri yekukweretesa mogeji inobhadharwa kumutengesi yaive imwe 50% yemutengo wekutenga.
Wekambani kiredhiti mutengi akakwanisa kutenga iyo pfuma nemari shoma pasina mari kunze kwake
Heino muenzaniso wechibvumirano chekutengesa zvivakwa izvo zvingangodaro
Mutengo wekutenga $ 500,000
Mutengi anoda kukwereta iyo yose $ 500,000
Mutengi anodawo kukwereta madhora zana nemakumi mashanu ekugadzirisa chivakwa.
Saka, mutengi anoda kukwereta $ 650,000 pamutengo we $ 500,000 wekutenga.
Mutengi anoti chivakwa "chakakosha" $ 1 miriyoni. Imba yacho inogona kunge yakakosha madhora miriyoni imwe muchidzidziso. Asi kuongororwa kunoitwa pamitengo chaiyo uye kwete kuti mitengo ipi "inofanira" kuva. Nekudaro, nekutenga uku, isu tave nemadhora akaenzana emadhora zviuru mazana mashanu pamusika nezvimwe zvivakwa mu
nzvimbo ichaongororwa. Kunyangwe isu, sevashambadziri, tichigona kupokana nepfungwa iyi kudzamara takaita bhuruu kumeso, vanokweretesa vanowanzoita zvikwereti zvakaderera pane
icho kukosha kwakayerwa kana mutengo unotarisirwa wekutenga uri uye kwete pane izvo zvatinofunga kuti mutengo wekutenga ungave kana unofanirwa kuve. Kwete kuti hapana zvisipo pamutemo uyu; asi tarisira kuti uyu mutemo unoteedzerwa neanokweretesa kazhinji.
Kuvandudzwa Kwakavimbika - Pakushambadza, kuvimba kwevatengi kunowedzerwa kana zvirevo zvakaita sekuti "Kambani yedu yanga iriko kubvira…" Izvi zvinonyanya kukosha kana iwe uchinge wanyatsoita bhizinesi mune iyo indasitiri yenguva yakatarwa kwete pane nhamba makore kambani yanga iri pasherufu.
Corporate Kiredhiti - Dzimwe nguva zvinogona kuve nyore kana uchigadzira chikwereti na mabhengi, vatengesi, vatengesi uye vanoita mari kuti vave nekambani yekare. Kunyangwe ichi chingave chinhu chidiki pakati pezvimwe, zvimwe zvinhu zvakakosha, sekukweretesa uye purofiti. Kungofanana nebhizimusi chero ripi zvaro richangobva kuwanikwa, tinokurudzira kuburitswa kwakazara kuti uchangobva kuwana sangano revakuru.
Makambani Akabatanidzwa ane runyorwa rwemakambani akasimbiswa ayo anowanikwa kutengwa nekukurumidza. Iwo makambani anotengeswa pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro. Kune makambani aripo akagadzira maakaundi ebhengi uye mitsara yechikwereti. Tinogona kana kuti hatina makambani akadaro anowanikwa. Iwo makambani akasununguka pamutero kana mutero wepamutemo. Chinhu chimwe chete chingasanganisira makambani eCalifornia uko kunowanikwa muripo wepagore wefranchise.
Iye real estate kosi mudzidzisi ane huwandu hwevatengi vanobatanidzwa mune imwe kana yakawanda real estate transaction vachishandisa makambani avo akawanikwa kuburikidza nebasa redu. Chimwe chezvikamu zvikuru zvepurogiramu dzidzo. Tiri kupa mubatanidzwa kana LLC uye kudzidziswa maitiro ekuishandisa kutenga zvivakwa. Chirongwa chedu chakasarudzika uye, kuruzivo rwedu, chirongwa chakafanana hachipiwe nerimwe sangano.
Pane mari yatinowana panzvimbo yako kana tikakupa iyo mubatanidzwa kana LLC uye neiyi yakabatanidzwa kudzidziswa uye kubvunza. Nekuti izvi zvinoshandiswa hazvidzoreke nesu zvinhu zvisingadzoreke. Kuzadzisa zvimwe zvikumbiro zvechikwereti, iyo chikwereti inogona kuendeswa kune vechitatu mapato. Iyo chikwereti chinozadzikiswa kuburikidza neyechitatu bato inogona kana isingade kushandiswa kwekambani iri kutengwa kuburikidza nechirongwa ichi. Isu tichaedza kugutsa zvaunoda nekugona kwedu kwese mukati mechikamu chechirongwa chedu.
Makambani Akabatanidzwa anogona zvakare kupawo hofisi chaiyo muhurumende yeUS uye masimba mazhinji ekunze anosanganisira kero ine kutumira tsamba, nhamba yefoni uye nhamba yefakisi. Izvi ndezve vanhu vanoda kuita bhizinesi asi vasingade kushandisa avo kero dzekumba kune bhizinesi ravo.
Isu tinogona zvakare kumisikidza iyo US kana yekumahombekombe account kubhengi kune yako mubatanidzwa kana LLC. Iwe unenge uine mukana wepamhepo kuaccount yako pamwe nekadhi rekubhengi. Pamari shoma yemari, iwe unoshandisa kadhi rako rekutenga pakutenga. Pamari hombe, iwe unoshandisa iyo bhangi yepamhepo sevhisi uye waya waya kune avo vaunoda kutenga. Makambani Akabatanidzwa anopa anodiwa "Anokodzera Anosuma" tsamba kumabhangi kuti account yako isungurwe iwe usipo. Sezvingatarisirwa, kana tichiwana chekambani chikwereti tinokurudzira kuzara zviri pamutemo zviri pamutemo uye wezvemitemo uye mutero kuraira negweta uye accountant.
Makambani Anopindirwa nguva dzose ongororo uye anoshanyira anobatsira emuno nemahombekombe emabhangi uye masimba ekubatanidza. Tine hukama nemabhangi pasirese uye tinokwanisa kugadzirisa chirongwa chinokodzera zvaunoda iwe wega. Zvivakwa zvemitengo yezvivakwa uye zvirongwa zvekukweretesa zvivakwa zvakatenderera muchimiro. Saka, semutengi iwe unonzwisisa uye unobvuma kuti chirongwa chedu chinogona kuchinja pasina ziviso. Isu tinopa sevhisi pasi pechirongwa ichi kwegore rimwe pane musangano, sezviripo, hwaro.
Kugadzirira iyo Aged Corporation or Sirifiti Corporation (inonziwo pasherufu zvitunha zvine mari yechikwereti or pasherufu zvitunha nechikwereti chirongwa kana pasherufu zvitunha zvine chikwereti mitsara or makambani akwegura ane Paydex yakasimbiswa TM Scores), ndapota fona 1-888-444-4412, kana pasirese ku + 1-661-310-2688 uye taura nemumwe wevanyanzvi vedu vanofara kukubatsira. Ndokumbira ufonere Muvhuro kusvika Chishanu pakati pemaawa e7: 00 AM uye 5: 00 PM Pacific Nguva.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaGunyana 12, 2020